Ọkara mkpịsị aka maka ụmụ nwoke - Atụmatụ Echiche Tattoos
1. Ọkpụkpụ Ufe Ọkara na ikwiikwii na bilie n'ubu ubu aka eme ka ndi mmadu puta
Ndị mmadụ na-ahụ tattoo Half Sleeve na akụrụ aka ekpe ha igosi ọdịdị dị oke mma
2. Ọkara Ọkpụkpụ Ọkara na ogwe aka nri na-eme ka nwoke nwee anya dị mma
Ndị na-ahọrọ uwe elu ndị na-adịghị mkpịsị aka ga-aga maka mkpịsị aka nkwụ Half na aka nri ha iji nye ha anya mara mma.
3. Ọkpụkpụ Ufe Half na ogwe aka aka nke aka na-eme ka nwoke dị jụụ
Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịnwe Ọkpụkpụ Ufu Ọkara na ogwe aka aka ha n'aka ha. Nke a na-egosi ọdịdị nwoke ha
4. Ndị mmadụ na-eme ka tattoo Half Sleeve na ogwe aka ha iji mara ya
Ndị mmadụ na-etinye Ọkara Uwe Ọkpụkpụ na ogwe aka iji mee ka ọ bụrụ ihe na-amasị ndị mmadụ
5. Onu ogugu onu ogu n'aka ekpe kwesiri ime ka mmadu di ebube
Ndị mmadụ na-enwe mmasị iji aka ha na-enweta Ọkara Uwe Ọkara Half iji nye ha ihe magburu onwe ya
6. Ọkpụkpụ mkpịsị aka na aka nri na-eme ka mmadụ bụrụ onye nzuzu
Ndị mmadụ na-enwe mmasị iji aka ekpe aka ekpe ha na ogwe aka ekpe ha na-eji ejiji ink. Ụdị egbu egbu a na-eme ka ha nwee ọdịdị ihu efu.
7. Ọkara Ọkpụkpụ Ọkara na ogwe aka ekpe aka ekpe na agba ọchịchịrị ga-agbakwunye na ahụ ọkụ ahụ iji nye anya nsị.
Ndị na-acha ọcha akpụkpọ anụ ga-ahọrọ akara mgbịrịgwụ nke oghere Ọkpụkpụ Half na ogwe aka ekpe aka ekpe. Nchepụta Ink nke Akara Akpịrị Ọkara Ọkara ga-enye ha swagger anya.
8. Ọkpụkpụ Ọcha Ọkara na compass na ubu na-eme ka mmadụ lee anya hypnotic
Ndị ikom nwere akpụkpọ ahụ ga-aga maka Tattoo Sleeve Tattoo nke a. Uche a na-egbu egbu egbugbere anya a ga-enye ha anya ọgwụ.
9. Ọkpụkpụ Ọkpụkpụ Half na a nhazi nke okpokoro isi, na ogwe aka dị elu na-eme ka ọkpụkpụ ahụ pụta na ụmụ nwoke
Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịnwe ọnya ọkpụkpụ Half na ogwe aka elu. Ụdị egbu egbu a na-egbuke egbuke, nkochi ink nke na-enye ha ọdịdị ahụ
10. Ọkara Ọkpụkpụ Ọkara na ogwe aka nri dị elu na-eme ka nwoke dị egwu
Ndị mmadụ ga-ahọrọ ka ha nwee akara akara Half na ogwe aka aka nri ha na-eji ụdị ink nke onu. Nke a na-eweta ọdịdị ha.
11. Ọkpụkpụ Aka Ọkara Ọkara na aka nri aka nri wolf oyiyi imewe ka nwoke dị mma
Ndị mmadụ na-enwe mmasị na-etinye Ọkpụkpụ Ọkpụkpụ Half na aka nri aka nri ha na mkpofu oyiyi oyiyi, ink imewe. Nke a na-enye ndị mmadụ ezigbo mma.
12. Mpempe Ọkpụkpụ Half na aka nri aka nri na-eme ka nwoke dị mma
Mmadụ na-enwe mmasị ịnwe Ọkara Ọkpụkpụ Ọkara na aka nri aka nri ya na nhazi ime mkpatụ. Nke a na-enye anya dị mma
akwara obiokpueze okpuezeNtuba ntughariegbu egbu diamondn'olu oluAnkle Tattoosụkwụ akaagbụrụ eboegbu egbu osisi lotusdi na nwunyeụmụnne mgbuỤdị ekpomkpaọnwa tattoosaka mma akannụnụechiche egbugbuaka akandị na-egbuke egbukeegbu egbu okpuakara ntụpọngwusi pusina-adọ aka mmaegbu egbu maka ụmụ nwokeakpị akpịegbu egbu ebighi ebiarịlịka arịlịkaegbu egbu egbuzodiac akara akaraima ima mmaenyí egbu egbuegbu egbumma tattoosegbugbu maka ụmụ agbọghọegbu egbu mmiriegwu egwuaka akandị mmụọ ozirip tattoosna-egbu egbuegbugbu egbugbuUche obiegbu egbu hennaEgwu ugoGeometric Tattoosenyi kacha mma enyiazụ azụudara okooko osisimehndi imeweọdụm ọdụmkoi ika tattoo